देवकोटालाई महाकवि बनाउने प्रा. डा. ईश्वर बराल « LiveMandu
२८ कार्तिक २०७६, बिहीबार १६:०८
२०५४ सालको आरम्भमा बराल बिरामी परे । उपचारार्थ उनी भारतको नयाँ दिल्ली पुगे । त्यहाँको अस्पतालमा भर्ना भएपछि निष्कर्ष निक्ल्यो- उनलाई ‘ब्रेन ट्युमर’ भएको रहेछ । मीठो बोलीचाली भएका बरालले अनायासै आफ्नो वाणी दैवलाई दान दिनुपर्यो । त्यति राम्रो वाक्शक्ति भएका बरालले त्यसपछि मौनतामा जीवन अर्पण गर्नुपर्यो । त्यति मात्र होइन, नेपाली साहित्यफाँटमा अत्यन्तै सुन्दर हस्ताक्षर हुनेहरूमध्ये एक बरालका ती सुन्दर अक्षर पनि २०५४ सालको वैशाखदेखि कहीँकतै नआउने भए । सरस्वतीका वरद पुत्र ईश्वर बराल लेख्न र बोल्नबाट वञ्चित हुन पुगे । हुँदाहुँदै २०५४ सालको कात्तिक २७ गते बुधबार एकाबिहानै काठमाडौंमा उनले देहत्याग गरे ।
त्यस बेला उनका सहपाठी थिए विजय मल्ल । साथै त्यस समय नै लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, हृदयचन्द्रसिंह प्रधान आदिसँग बरालको घनिष्ठता भइसकेको थियो । त्यस बेला उनले नेपाली साहित्यका बारेमा केही जान्ने र सुन्ने मौका पनि पाए । त्यसैको परिणामले उनले २००० सालमा शारदामा एउटा लेख छापे । ‘कथाको परिभाषा’ शिर्षकको सो समालोचना समीक्षाजगत्को उनको प्रथम प्रस्तुति थियो ।
एम्.ए. अध्ययनका लागि पनि बराल काशी हिन्दू विश्वविद्यालयमा भर्ना भए । त्यस बेला उनी समीक्षात्मक कलामा झन् उर्त्सर्ग भए । उनले समीक्षाका लागि मम्मट र टी.एस. इलियटलाई गुरु थापे । नेपाली भाषाप्रतिको न्यानो माया, मोह र भावना बोकेर उनी २०१८ सालमा संयुक्त अधिराज्य पुगे ।
देशमा बहुदलीय प्रणाली भित्रिएपछि पहिलोपल्ट प्रज्ञाप्रतिष्ठानको उपकुलपति हुने पनि ईश्वर बराल नै भए । २०५० सालसम्म उनी उपकुलपतिपदमा विराजमान थिए । नेपाली साहित्यमा उल्लेखनीय सेवा गरेबापत उनले महाकवि देवकोटा महासम्मान, बालचन्द्र पुरस्कार, झपट पुरस्कार र सीताराम पुरस्कार प्राप्त गरे ।
बरालले साहित्यका अतिरिक्त सुरुदेखि नै शिक्षापेसालाई अपनाए । उनले २००६ सालदेखि २००८ सालसम्म दार्जिलिङ सरकारी कलेजमा नेपाली पढाए भने २००८ सालदेखि २०१३ सालसम्म त्रिचन्द्र कलेज र पद्मकन्या कलेजमा प्राध्यापन गरी आफ्नो उत्कृष्ट प्राध्यापकीय सीपको पनि प्रदर्शन गरेका थिए । विभिन्न राजनीतिक खिचातानीले गर्दा उनी नेपालमा अटाउन सकेनन् । परिणामस्वरूप उनी भारतको नयाँदिल्लीस्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय फर्के ।
२०४७ सालमा बराल नेपाल राजकीय प्रज्ञाप्रतिष्ठानका उपकुलपति मनोनीत भए । देशमा बहुदलीय प्रणाली भित्रिएपछि पहिलोपल्ट प्रज्ञाप्रतिष्ठानको उपकुलपति हुने पनि ईश्वर बराल नै भए । २०५० सालसम्म उनी उपकुलपतिपदमा विराजमान थिए । नेपाली साहित्यमा उल्लेखनीय सेवा गरेबापत उनले महाकवि देवकोटा महासम्मान, बालचन्द्र पुरस्कार, झपट पुरस्कार र सीताराम पुरस्कार प्राप्त गरे । श्रीमती रानु बराल तथा प्रा.डा.शशि शर्मा र प्रा.डा.ज्योति शर्माको आर्थिक सौजन्यमा नइ प्रकाशनबाट बरालक‍ो सम्मानमा नइ ईश्वर बराल पुरस्कारको समेत स्थापना भएको छ ।
बरालका पन्ध्रवटा प्रकाशित कृतिहरूमध्ये उनको जीवनकालमा आठवटा र निधनपछि शरद्चन्द्र शर्मा भट्टराईको सङ्कलन र सम्पादनमा छवटा कृति प्रकाशित भए । उनले पारिजातका कविता सम्पादनदेखि रवीन्द्रनाथ ठाकुरका कथा अनुवादसम्मको काम गरे ।
नेपाली साहित्यकाशमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने बराल थुप्रै समयसम्म भारतमा बसे पनि उनले निरन्तर रूपमा नेपाली भाषासाहित्यका बारेमा लेखिरहे । समीक्षामा आफूलाई कठोर बनाए पनि डा. बराल नरम, सादा र सीधा थिए । गुलाफका बिरुवा हुर्काउने र मलजल गर्ने इच्छामा आबद्ध बराल गुलाफ फुलेको हर्नमा त्यति नै रमाइलो मान्थे । उनको घर सिफलमा उनी बिहानबेलुका प्रायः फूल गोडमेल गर्नमा नै व्यस्त रहन्थे ।
नेपाली साहित्यका अमर समीक्षक ईश्वर बराल समालोचनाजगत्का एक होनहार प्रतिभा थिए ।बरालको समालोचकीय प्रणाली वैज्ञानिक र र्सवमान्य थियो । कुनै पनि व्यक्तिले उनको समालोचनालाई खोट लाउन सकेका थिएनन् । बरु उनका लेखनीमा स्थापित शब्दहरूबारे गुनासाहरूचाहिँ आइरहने गर्थे । बरालले नेपाली समाजलाई जति दिए थुप्रै दिए । उनको एक्लो प्रयासले उनले नेपाली प्रज्ञाप्रतिष्ठानलाई पनि उछिने र साझा प्रकाशनलाई पनि जिते । वास्तवमा २००० सालदेखि बाँचुञ्जेल निरन्तर नेपाली समालोचनाका लागि समर्पित हुने व्यक्ति पनि बराल एउटै थिए । उनले यस आधा शताब्दीमा नेपाली भाषाको मन्दिरनिर्माणमा अत्यधिक लगानी गरे । उनी आधुनिक नेपाली समालोचनाका सगरमाथा बने । उनी नेपाली भाषाको समीक्षाविधाका एक आधिकारिक महापुरुष बने । उनी नेपाली वाङ्मयसंसारका एक श्रद्धेय, आदरणीय र अमर विभूति बने ।
#पं. देवीरञ्जन बराल
#प्रा. डा. ईश्वर बराल